तीजकाे मुखैमा साेच्नै नसक्ने गरी ह्वात्तै घट्याे सुनकाे भाउ, हेर्नुहाेस कतिमा हुँदैछ काराेबार ? – Jagaran Nepal
काठमाडौँ । आज सुनचाँदीको मूल्य घटेकाे छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ९८ हजार ८ सय सय रुपैयाँमा कोरोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
त्यस्तै आज तेजावी सुन प्रतितोला ९८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला १३ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
हिंजाे छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख हजार ४ सय सय रुपैयाँमा कोरोबार भएकाे थियाे भने तेजावी सुन प्रतितोला ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकाे थियाे । हिंजाे चाँदीको प्रतितोला १३ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
साताको पाँचौ दिन अर्थात बिहीबार सुनको मूल्य ह्वात्तै घटेको छ। आज छापावाल सुन १६ सयले घटेर प्रतितोला ९८ हजार ८ सय सय रुपैयाँमा कोरोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९८ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो तेजावी सुन प्रतितोला ९९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी १५ रुपैयाँले घटेर प्रतितोला १३ सय ६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो चाँदी १३ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
याे पनि पढ्नुहाेसः सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षणसहितका कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै
काठमाडौं, पछिल्ला केही दिनयता लक्षणसहितका कोरोना भाइरस संक्रमितहरू देखिन थालेका छन् । सम्बन्धित जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकारीका अनुसार संक्रमितमा लक्षण देखिन थालेको हो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख धीरजंग शाहका अनुसार संक्रमितमा लक्षण देखिन थालेको छ । उनले भने, ‘मुख्यतः संक्रमितमा ज्वरो र खोकी लागेको छ । केही संक्रमितलाई अक्सिजनसमेत आवश्यक परेको छ।’ स्वास्थ्य कार्यालय झापाका प्रमुख ईश्वरी पौडेलले पनि संक्रमण थप जटिल बन्दै गएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।
उनले भने, ‘लक्षणसहितका संक्रमितमा सास फेर्न अप्ठेरो भएको पनि छ । बिस्तारै यो क्रम बढ्न सक्छ।’ अधिकांश जिल्लामा सक्रिय संक्रमित हुनेहरूमा दीर्घ रोगी रहेका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद भगतले लकडाउन खुलेयता लक्षणसहितका संक्रमित देखिन थालेको बताए।उनले भने, ‘सक्रिय संक्रमितमा ज्वरो आउने र खोकी लाग्ने जस्ता लक्षण देखिएको छ । उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको छ।’ सक्रिय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको भन्दै सचेत र सतर्क रहन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्।स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर ११ हजार १ सय १८ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
आज साेच्नै नसक्ने गरी ह्वात्तै घट्याे सुनकाे भाउ, हेर्नुहाेस कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
एकैदिन ३ हजार ४ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
आज साेच्नै नसक्ने गरी ह्वात्तै…. सुनकाे भाउ, हेर्नुहाेस कतिमा हुँदैछ काराेबार ?
मुकेश अम्बानीको ८० हजार करोड बराबरको सम्पत्ति एकैछिनमा स्वाहा